Barcelona Oo Garoon Faaruq Ah Ku Dhex Xasuuqday Las Palmas Kadib Mashaqadii Aftida Catalonia | Himilo Media Group
Barcelona Oo Garoon Faaruq Ah Ku Dhex Xasuuqday Las Palmas Kadib Mashaqadii Aftida Catalonia
Mararka qaar ciyaaraha kubadda cagtu waxay yeeshaan macno ka weyn ama ka sal balaadhan in lagu kala qaado saddex dhibcood oo kaliya, waxaana tusaale kuugu filan, kulankii xalay ka dhacay geggida Nou Camp ee caasimada gobolka Catalan wadanka Spain ee Barcelona.
Ciyaartan oo laga fikirayay ama laga cabsi qabay inay baaqanayso iyo in kale, ayaa aakhirkii la iclaamiyey inay dhacayso oo aanay baaqanayn, balse ka qabsoomi doonto geggo faaruq ah oo albaabadu u xidhan yihiin.
Shacabka gobolka Catalonia ayaa u dareeray shalay subax – cod bixinta Afti ay ku kala dooranayeen inay kaga go’ayaan wadanka Spain iyo in kale, balse ay ka dhasheen rabshado iyo isku dhacyo dhex mara, ciidamada ammaanka iyo shacabkii u soo baxay si ay codkooda u dhiibtaan, kuwaas oo Booliisku ka hor joogsadeen goobihii cod-bixinta.
Xukuumada wadanka Spain ayaa qaaday talaabo ay ku hor istaagayso cod bixinta ay shacabka gobolka Barcelona caasimada u tahay ee Catalonia doonayeen inay kaga madax banaanaadaan, waxaanay maxkamada dastuuriga ah ee dalkaasi shaacisay in aftidaasi ay tahay mid aan sharci ahayn.
Saraakiisha ciidamada Booliiska ayaa shacabka iska hor taagay goobihii cod bixinta, xoogna kaga raray sanaaduuqdii iyo waraaqihii codaynta – goobihii loogu talo galay inay aftidu ka dhacdo.
Caasimada gobolka ee Barcelona, ciidamada ayaa isticmaalayay – qiiqa dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasta rabadhka ah kadib markii ay bilaabmeen mudahraadyo shacabku ku doonayaan in aftida cod bixinta loogu ogolaado.
Maamulka naadiga Barcelona ayaa shir ay subaxnimadii hore ee Axadii galeen go’aan kaga gaadhayay in ciyaarta la ciyaaro iyo in kale – jawaabtii ka soo baxdayna waxay noqotay “HAA” waa in ciyaartu dhacdaa xiligii la qorsheeyey.
Kulankan oo aanay fadhiyin wax taageerayaal labada dhinac ah, gebi ahaana tartabuunadu ahaayeen kuwo banaan ayaa waxaa 3-0 guusha kula hoyatay kooxdii loo martida ahaa ee Barcelona.
Saddexda gool ee Barca ku badisay oo dhamaantood qaybtii dambe ee ciyaarta dhashay ayaa waxaa u kala saxeexay – Sergio Busquets (49′) – Lionel Messi ( 70′ iyo 77′).